Arjantiina - BBC News Somali
Posted at 16:42 25 Maarso 202116:42 25 Maarso 2021
'Aabbeheey wuxuu ahaa dilaa halis badan'
Qaar ka mid ah carruurta ay dhaleen raggii gacan ka geystay in "la waayo" kumannaan qof oo reer Argentine ah sannadihii 1970-meeyadii iyo 1980-meeyadii ayaa hadda bilaabay inay ka hadlaan arrimo ka dhan ah aabbeyaashood oo dambiyo galay.
Posted at 6:00 22 Disembar 20206:00 22 Disembar 2020
Maxaa la isugu haystaa maydka xidiggii kubadda cagta?
Meydka waa in la keydiyaa, ayuu yiri xaakimka, iyadoo ay soo baxday haweeney sheeganeysa in laga yaabo in xiddigga kubadda cagta uu yahay aabbaheed.
Posted at 4:32 26 Nofembar 20204:32 26 Nofembar 2020
Sidee adduunku uga falceliyey geeridii Maradona?
Halyeeygii kubada cagta Diego Maradona, oo ka mid ahaa ciyaartoydii ugu fiicnaa abid kubadda cagta, ayaa ku dhintay da'aadda 60 jirka.
Posted at 1:53 26 Nofembar 20201:53 26 Nofembar 2020
Sawirro: Diego Maradona xiddiiggii kubadda cagta ee geeriyooday
Sawirro xul ah oo ku saabsan waayihi kubadda cagta ee xiddiggii u dhashay dalka Argentina Diego Maradona ee Geeriyooday .
Posted at 16:54 25 Nofembar 202016:54 25 Nofembar 2020
Ciyaartooygii caanka ahaa ee reer Argentin Diego Maradona ayaa geeriyooday isaga oo ay da'diisu tahay 60 jir.
Posted at 10:25 31 Agoosto 202010:25 31 Agoosto 2020
Ma run baa in Messi uu qaabkan u diray warqadda codsiga ee Barcelona uu kaga tagayo?
Fax-ka oo la casriyeeyay waxaa si weyn loo adeegsan jiray bartamihii 1980s, xilliggaas oo ku beegneyd markii uu Messi dhashay.
Posted at 3:40 30 Abriil 20203:40 30 Abriil 2020
Coronavirus: "Ma doonayo inuu dhinto ninki wiilkeyga dilay"
Hooyo ku nool dalka Argentina ayaa sheegtay iney ka cabsi qabto gacan ku dhiiglihii wiilkeeda dilay oo ku jira xabsi inuu u dhinto Covid-19.
Posted at 4:43 24 Jannaayo 20204:43 24 Jannaayo 2020
Koox dhammaan ciyaartoyda u dheesha ay isku magac yihiin
11 ciyaartoyda kooxdan ayaa lagu magacaabaa Riquelme, oo ah magac aad looga yaqaano qaaradda Amerika.
Posted at 4:47 24 Disembar 20194:47 24 Disembar 2019
Safiir isaga oo buug xadaya lagu qabtay
Danjirihii Mexico u fadhiyey dalka Argentina ayaa is casilay ka dib markii ay soo baxeen eedo sheegaya in uu wax xadayey, waxaana sidaa muujiyey muuqaal la helay oo tusaya isaga oo buug ka xadaya maktabad buugaagta lagu iibiyo.
Posted at 5:21 3 Agoosto 20195:21 3 Agoosto 2019
Messi oo laga mamnuucay kubadda cagta ee caalamiga ah
Kabtanka kooxda qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa muudo 3 bilood ah laga mamanucay cayaaraha kubadda cagta ee caalamiga ah, ka dib markii Koobka Qaramada Ameerica uu ku tilmaay mid musuqmaasuq daashaday.